यद्यपि मानिसहरूको आवश्यकता फरक छ, हामी सबैलाई एक लक्ष्यको लागि आफ्नै बाटो खोज्दै छौं: प्रेम र प्रेम महसुस गर्न। आदर्श सम्बन्धको रहस्य भनेको "लिने" र "दिने" बीचको सन्तुलन प्राप्त गर्न हो। यस लेखमा हामी सोच्नेछौं: असल सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण के हो, उनीहरूलाई कसरी आदर्श बनाउन र साढे वर्षका लागि बचत गर्ने।
एक आदर्श सम्बन्धमा के महत्त्वपूर्ण छ?
आफैलाई माया गर्छु। आफ्नो प्रियजन संग एक सम्बन्ध कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सोच्नुहोस्, सबै भन्दा पहिले, कुन तरिकामा तपाईं आफैसँग हुनुहुन्छ भनेर विश्लेषण गर्नुहोस्। स्वार्थ संग आत्म-प्रेम को भ्रमित नगर्नुहोस्, यो केवल तपाईं को साथ साझा गर्न केहि छ कि अर्थ हो। यदि तपाईं आफैलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने, तपाईं आनन्दित हुन सक्नुहुन्न। यदि तपाईं खुसी हुनुहुन्न भने, तपाईं अर्को व्यक्तिलाई साँचो खुशी दिन सक्नुहुन्न। यदि तपाईं केवल प्रियजनहरू जिउनुहुन्छ भने, आफैलाई सोच्नु हुँदैन, त्यसपछि प्रेम आदी हुनको जोखिम हो। यो राम्रो सम्बन्धको राम्रो उदाहरणको हुन सक्छ।
स्वतन्त्रता। यो नियम पहिलोबाट पछ्याउँछ। सायद तपाईं सोच्नुहुन्छ कि आजादी जिम्मेवारीको कमी हो। तर वास्तवमा, यो अर्को प्रकारको स्वतन्त्रता हो: एक जीवनको पूर्ण जिम्मेवारीको चेतना (साझेदारको विफलताको आरोपबाट स्वतन्त्रता) र एक परिणामको रूपमा, स्व-विकासको लागि इच्छा। यसबाहेक, आदर्श सम्बन्धको निम्न नियम स्वतन्त्रताले पछ्याउँछ।
पारस्परिक सम्मान। भित्री प्रेमले क्रमशः चारैतिर घुमाउछ भने, पारस्परिक आदरले चमत्कार गर्न सक्दछ। तिनको लागि धन्यवाद तपाईंले सानो झन्झटबाट बचाउनुहुनेछ, जसले सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ, तपाईं सुन्न र एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
विश्वास र वफादारी। यसले संदेह र असमानतालाई प्रेमको ऊर्जा बर्बाद गर्न मद्दत गर्दैन। र विश्वास पनि दिन्छ, एक आदर्श सम्बन्धको लागि धेरै महत्वपूर्ण।
परिवर्तन गर्न विलम्ब। असल सम्बन्धको मनोविज्ञान बुझ्न हो कि एक प्रेमले मात्र एक तरिकामा मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ - आफूलाई परिवर्तन गरेर। आखिर, तपाईंप्रतिको मनोवृत्ति आफैले तपाईंको मनोवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो।
आध्यात्मिक अंतरिमता। यो गुणले विश्वास दिन्छ कि एकअर्कामा एक पलमा खोल्न सकिन्छ।
संयुक्त स्तुति र सामान्य मूल्यहरू। यो राम्रो छ जब तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ र एकअर्कालाई रोचक छ, ठीक छ? सामान्य शौकहरू र चासोहरू, जीवनमा सामान्य विचारहरू जस्तै, कुनै पनि जोडालाई बलियो बनाउँछ।
प्रेम र स्पर्शको शब्द। तपाईंको भावनाको बारेमा एकअर्कालाई भन्नु र शारीरिक सम्पर्क बनाए राख्नु नबिर्सनुहोस्। एक अर्कालाई प्राय: गफ गर्नुहोस्!
एक पूर्ण यौन जीवन। सेक्सको गुणलाई कम नदिनुहोस्, किनकि सबैभन्दा राम्रो सेक्स - एक राम्रो सम्बन्धको ईंटहरू मध्ये एक। बिस्तर मा मिलान स्वभाव, दिन को लागि र मजा लेने को इच्छा - जो जोडी को यौन सम्बन्ध मा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
सामाग्री भलाई। यो लक्जरी विला र व्यक्तिगत कारहरुको संग्रहको बारे होइन। यो महत्त्वपूर्ण छ कि भौतिक सुचारुको बारेमा तपाईंको विचारहरू, किनकि हरेक जोडीले प्रमोदवनलाई लुगा लगाउँदैन, यद्यपि सबै सम्पत्तिहरू सबैलाई आवश्यक छैन।
भविष्यको लागि आम योजना भविष्यमा एकअर्कालाई विश्वास दिन। केहि कार्यको लागि उत्तेजित तिनीहरू स्वतन्त्रता दिन्छन्। एक इमानदार स्नातक रोमांटिक कार्यहरू हटाउनेछ, जान्दछन् कि यो महिलाले एक बलियो परिवार बनाउन को लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। अनि, सम्भावना, एक व्यक्ति जो गम्भीर सम्बन्धको लागि तयार छ, आफ्नो प्रिय ज्ञान र फिक्री छ कि ज्ञानबाट आफ्नो हात छोड्न सक्छ।
तपाईंको जोडीलाई आदर्शको नजिक ल्याउन, ईमानदारीपूर्वक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्: जसको लागि तपाई यो गर्न चाहानुहुन्छ? यदि अरूको ईर्ष्या हो भने - त्यसो भए तपाईंको योजना विफलताको लागि कष्ट हुन्छ। सधैँ एक आदर्श सम्बन्ध बाहिर जस्तै जस्तो देखिन्छ, र आफन्त र मित्रहरु को लागी एक विज्ञापन पोष्टेर गरेर, तपाइँ यी समय सम्बन्धी बिस्तार को आधार मा बिताउन को लागी खर्च को सम्झना गर्न सकिन्छ। यो एकदम राम्रो छ कि सबै भन्दा राम्रो सम्बन्ध एक स्थायी नौकरी हो भनेर महत्त्वपूर्ण छ। उसलाई मायालु बनाउनुहोस्, सफलता पाउनुहोस् र सबैभन्दा राम्रो जोडाको लागि अद्भुत क्यारियर बनाउनुहोस्!
केटीहरू किन खराब मान्छे मन पराउँछन्?
तपाईं कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ?
कसरी मानिसले आफ्नो महिलालाई रोज्छ?
प्रेम वा आदत
पुरुषहरू किन डराउँछन्?
मानिसको मनोवृत्ति कसरी बुझ्न सकिन्छ?
इज्जत सिक्न कसरी?
प्रेममा महिलाहरु को मनोविज्ञान
मान्छे को मनोविज्ञान
गायक जेनिफर लोपेजले उनको प्रेमीसँग कुराकानी गरे, उनको बेड बिना
कपालको कपाल रङ
स्वादयुक्त मासु संग आटा-शैली पास्ता - साधारण डिश बनाउनको लागी रोचक विचार
शबत - उपयोगी गुणहरू
असामान्य फोटो शूट
कार्मिक रोग र उनीहरूको कारणहरू
केले ट्याब्लेटले ल्यापटपबाट फरक बनाउँछ?
लागूपदार्थ दुर्व्यवहार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
वजन घटानेको लागि फिटनेस आहार - मेनु
गर्भपातको गृह तरिका
खाना खाएर कति व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ?
गुलाबका लागि उर्वरक
अनुहारमा खुट्टाको उपचार औषधि संग
चावल र डिब्बाबंद माछा संग सलाद
जन्म मितिद्वारा गंतव्य
कपडामा फैलाउने प्रवृत्ति 2014
कफीको लागि के उपयोगी छ?
लिङ्ग कोठा डिजाइन
लोक उपचारको साथ बच्चाहरु मा ठंड को उपचार
पानीमा पनीर खाए